कोरोना अपडेटः संक्रमित १७ हजार १७७, निधन ३९ « Philco Mission
कोरोना अपडेटः संक्रमित १७ हजार १७७, निधन ३९
काठमाडौँ ।नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमणबाट थप रौतहटका ३६ वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार उनी दाइको दाहसंस्कार गर्न केही समयअघि भारतको मुम्बई गएका थिए। उनी भारतबाट फर्किएपछि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा रहेकै अवस्थामा स्वस्थ्यमा समस्या आएको थियो।
असार २९ गते स्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । सोही दिन नमुना संकलन गरी हेटौंडा प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो।
नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १७ हजार १ सय ७७ पुगेको छ। जसमा ११ हजार २५ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। बुधबार मात्रै ६ सय ९७ जना डिस्चार्ज भएको डा. गौतमले बताए । अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा ६ हजार १ सय १३ जना उपचाररत रहेका छन्। प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ४०, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ८ सय ९९, बागमती प्रदेशमा ४ सय ६६ र गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ६९ जना उपचाररत रहेका छन्।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ६ सय ५१, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ३ सय ६८ जना रहेका छन्। बुधबार विभिन्न २६ वटा प्रयोगशालामा ५ हजार ९० वटा पीसीआर परीक्षण भएका छ। आजसम्म २ लाख ९८ हजार ८ सय २९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभरी २४ हजार ५सय २७ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।